Thuthukisa ukubukeka kwezinhlelo zokusebenza ze-GTK + 3 ne-QT ku-OpenBox | Kusuka kuLinux
Thuthukisa ukubukeka kwezinhlelo ze-GTK + 3 ne-QT ku-OpenBox
I-OpenBox kungashintshwa ngezindikimba nezinjini I-GTK ukuze amawindi nezinhlelo zokusebenza zibukeke ziheha kakhulu futhi ziyahambisana nedeskithophu yethu. Ngeshwa, lezi zinguquko ungafaki isicelo seGTK + 3 njengoba izinhlelo ezintsha ezifakiwe ku-GNOME 3 hhayi izinhlelo zokusebenza ezakhiwe ku- QT.
Ukuze lezi zinhlelo zibe nesithombe ngokususelwa kudeskithophu yethu esekwe ku-OpenBox, kuyadingeka ukwenza izinhlobo ezimbalwa ze- izilungiselelo ezengeziwe zemanuwali.
1 Okwezicelo ze-GTK + 3
2 Okwezicelo ze-QT
Okwezicelo ze-GTK + 3
Kuzinhlelo zokusebenza ze-GTK + 3 ukusebenzisa itimu emnandi kakhulu noma efana kakhulu nezinye izinhlelo zokusebenza ze-GTK kusistimu yethu, kuyadingeka ukufaka amaphakheji we-librsvg kanye ne-gnome-themes-standard.
Qaphela: khumbula ukuthi le manuwali ye-OpenBox ku-Arch Linux kepha ungayivumelanisa nokunye ukusatshalaliswa.
I-sudo pacman -S librsvg gnome-themes-standard
Okulandelayo, dala ifayela lokumisa lapho ucacisa khona ingqikithi ezosetshenziswa yizinhlelo zokusebenza ze-GTK + 3.
i-nano ~ / .config / gtk-3.0 / izilungiselelo.ini
Namathisela imigqa elandelayo, ushintshe igama elithi THEME egameni le-GTK + 3 theme ofuna ukuyisebenzisa.
[Amasethingi] gtk-application-prefer-dark-theme = false
gtk-theme-name = ISIHLOKO
gtk-fallback-icon-theme = i-gnome
Kunezindikimba ezimbalwa ezinikeza ukubukeka okufanayo phakathi kwezinguqulo ze-GTK + 3 ne-GTK + 2, phakathi kwazo kukhona okulandelayo:
I-Adwaita ye-GTK + 3 ne-Aldabra ye-GTK + 2
Ukubukwa okusha kwe-GKT + 3 ne-Clearlooks ye-GTK + 2
Qaphela: khumbula ukuthi ukusetha itimu ye-GTK + 2 ezosetshenziswa yi-OpenBox ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-LXAppearance.
Kuzinhlelo ze-QT singasebenzisa uhlelo lwe-QTConfig olufakwe kumaphakeji we-QT 4.5 afakiwe lapho sifaka uhlelo olususelwa ku-QT.
Ukuqala, sebenzisa i-qtconfig kusuka ku-terminal.
Kanye ewindini Lokumiswa kwe-QT, khetha ithebhu yokubukeka. Lapho uzokwazi ukukhetha izinketho ezidingekayo zokushintsha isithombe sezinhlelo zokusebenza ezisekelwe ku-QT ezifakwe kusistimu yakho.
Izinketho ezidinga ukuguqulwa yilezi ezilandelayo:
Isitayela se-GUI: GTK +
Yakha Palette: Sikhetha imibala oyifunayo ye-3-D Effects ne-Windows Background.
Ngaphansi kwewindi, ungabona isithombe sokubuka kuqala sokuthi izinhlelo zokusebenza ezisekelwe ku-QT zizobheka kanjani izinguquko ezenziwe, uma usenelisekile ngezinguquko, chofoza kwimenyu yefayela bese ukhetha inketho ethi Gcina.
Lokhu kwanele ukuze zonke izinhlelo zokusebenza ezifakwe kusistimu yakho zibe nokubukeka okufanayo nokujabulisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Thuthukisa ukubukeka kwezinhlelo ze-GTK + 3 ne-QT ku-OpenBox
Ngifuna ukufaka okuthile. Ukuze ukuhlanganiswa phakathi kwe-openbox ne-Qt kube okuphelele, kufanele uqinisekise ukuthi umtapo wolwazi we- «libgnomeui» ufakiwe. Ngibe naleyo nkinga phakathi kukaLubuntu neVLC futhi ngiyixazulule kanjena. Impumelelo!
Kepha iziphi izingqikimba i-gnome-themes-standard enazo?
UCalligra, imbangi enkulu yeLibreoffice